University Preparation Program ကို တန်းခွဲသစ်ဖွင့်လှစ်မည်
ဆယ်တန်းဖြေဆိုထားပြီး တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်စေဖို့ အတွက် အဓိကထား သင်ကြားပေးမယ့် University Preparation Program – UPP တန်းခွဲသစ်ကို အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်မှာ စတင်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တက်ရောက်လိုသူတွေ အနေနဲ့ ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သင်တန်းကာလမှာ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် ကနေ မတ်လ ၁၇ ရက်အထိ ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ကနေ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာ နံနက် ၉း၃၀ မှ ၁၁း၃၀ အထိ သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းချိန် စုစုပေါင်း ၄၈ နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကြေး နှစ်သိန်းကျပ် ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသား ဦးရေကို ၂၀ သာ ကန့်သတ်သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကြားပေးမယ့် ဘာသာရပ်တွေကတော့ English5Skills (Thinking, Reading, Writing, Speaking & Listening), Advanced Academic Writing, Report, Proposal & Thesis Writing, IELTS Exam Preparation, 5. Communication & Critical Thinking, Public Speaking & Presentation, ICT Skills, 7.1 Computer Coding/Programming Concept, 7.2 Digital Life Management, 7.3 Data Analysis & Data-Driven Decision with Microsoft Excel, 7.4 Internet, Email & Online Learning, 8. “21 Lessons for the 21st Century” (New York Times Best Seller Book) စတဲ့ အကြောင်းအရာများစွာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ နေပြည်တော် သပြေကုန်း ROP သင်တန်းကျောင်း ဖုန်း – ၀၉၄၂၄၆၈၄၄၄၅ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။